मार्गदर्शन जुन तपाईंको लागि सही हो
अनलाइन सत्रहरू, निजी भ्रमणहरू वा व्यावसायिक प्रशिक्षण?
तपाईंको कोचिंगका लागि दिशानिर्देशहरू
अनलाइन जीवन कोचिंग, परामर्श र सोलवर्क थेरापी
हामी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सम्बन्ध, व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकास र उनीहरूको जीवन स्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछौं।
हामीलाई आफ्ना लक्ष्यहरू बताउनुहोस्, तिनीहरूलाई पुग्न के रोकिन्छ र के तपाईंले पहिले नै प्रयास गर्नुभयो।
कृपया तपाईंको शहर र देश, तपाईंको प्रेरणा, तपाईंको उमेर र चाहे तपाईं यात्रा गर्न रुचाउनुहुन्छ वा अनलाइन सत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
प्रणालीगत समाधान FAQ
हामी ग्राहकहरू जसलाई हामीले प्रशिक्षण दिएका छौ, र पेशेवरहरू जसले सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न सक्छन समस्याहरू र पहिचान हराउने
के तपाई सहयोगी पेशेवर हुनुहुन्छ? के हामी तपाइँलाई ग्राहकहरू तपाइँलाई पठाउन चाहन्छौं? हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको काम, तपाईंको विशेषता र तपाईंको अनुभवको बारेमा बताउनुहोस्।
हामी गर्नेछौं हैन ग्राहकहरु लाई सम्बन्ध गर्नुहोस् जो मानिसहरुसँग सम्बन्ध समस्याहरु व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, वा जसले केवल प्रस्ताव गर्दछ पृथक्करण, NLP वा नयाँ युग प्रविधि।
यदि निम्न मध्ये कुनै पनि तपाइँलाई लागू हुन्छ भने & #8211; कृपया पहिले स्थानीय मद्दत लिनुहोस्:
* तपाईं १ 18 बर्ष मुनिका हुनुहुन्छ
* तपाईं नि: शुल्क सत्रहरू चाहनुहुन्छ
* तपाईं परिवर्तनको साथ सामना गर्न सक्नुहुन्न
* तपाईं आफैले वा अरूलाई हानी गर्न सक्नुहुन्छ
* तपाईं आफ्नो दैनिक जीवन सामना गर्न सक्नुहुन्न
* तपाईंलाई मानसिक विकारहरूको उपचार चाहिन्छ
२ Over भन्दा बढी: तपाईं प्रेरित र परिपक्व देखिनुहुन्छ। कोचिंग तपाईं रमाईलो हुनेछ।
१ Over भन्दा बढी: तपाइँ परिवर्तन गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। हाम्रो कोचिंग तपाईको लागि राम्रो हुनुपर्छ।
१ Under बर्ष मुनिका: के तपाइँ परिवर्तन गर्न वास्तवमै तयार हुनुहुन्छ? तपाईंलाई कुन स्रोतहरू आवश्यक छ?
हाम्रो निजी सत्रहरूको बखत, तपाईं छलफल र आफ्नो लक्ष्य र योजनाहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि हामी सँगै उपयुक्त समाधानहरू खोज्दछौं जसले तपाईंको सम्बन्ध, तपाईंको काम र तपाईंको जीवनलाई सम्मान र सशक्त बनाउँदछ।
के तपाईं हामीलाई तपाईंको स्थानमा ल्याउन चाहानुहुन्छ?
अनलाइन कोचिंग कम गहन र अत्यधिक लचिलो छ।
निजी कोचिंग छिटो र तीव्र छ; हामी तपाईंलाई व्यवस्था गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
अनलाइन कोचिंग . निजी सत्रहरू . युगल कोचिंग . उन्नत प्रशिक्षण
लागतमा थपको लागि र #8211; हेर्नुहोस् लगानी
सायद सजिलो सन्दर्भको लागि यो पृष्ठ प्रिन्ट गर्नुहोस्
हामी मध्ये एकले तपाईको पहिलो ईमेल स्वतन्त्र रूपमा जवाफ दिनेछ
हामी राम्रोसँग परिभाषित नीतिशास्त्र अनुसरण गर्छौं & #8211; हेर्नुहोस् आचार संहिता
तपाईंको व्यक्तिगत विवरणहरू निजी हो & #8211; हेर्नुहोस् गोपनीयता नीति
अधिक सही तपाईको जवाफ दिनुहोस् र #8211; राम्रो हामी प्रतिक्रिया गर्न सक्छन्
आक्रामक ईमेल र पीडित जस्ता मागहरू प्रभावमा मेटाइन्छ
यो एक अनलाइन फारम होईन & #8211; कृपया ईमेल द्वारा यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्
कृपया प्रतिलिपि गर्नुहोस्, टाँस्नुहोस्, पूर्ण गर्नुहोस् र ईमेल गर्नुहोस्:
नाम: साझेदारी स्थिति: शहर / समय क्षेत्र:
उमेर: स्वास्थ्य: समस्या सुरु भयो:
तपाईंलाई कुन लेख मनपर्‍यो?
तपाइँ कहिले सुरू गर्न चाहनुहुन्छ?
तिमी सँग छ स्काइप र PayPal खाताहरू?
कृपया ईमेल संलग्नक न पठाउनुहोस् & #8211; केवल तपाईंको ईमेलमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्।
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको प्रेरणा, तपाईंको सफलताको लागि तपाईंको समय सीमा र तपाईं यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ भनेर उल्लेख गर्नुहोस्। यदि प्रासंगिक हो भने, तपाईंको शिक्षा, व्यवसाय र विशेष कौशल उल्लेख गर्नुहोस्; साथै कुनै रोग, अशक्तता, र तपाइँ मनोचिकित्सक ड्रग्स लिईरहनु भएको छ वा मनोचिकित्सा वा मनोरोग उपचार आदिमा भाग लिईरहनुभएको छ (यदि हो भने, हामी तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग हाम्रो कोचिंग समावेश गर्ने वा नगर्ने बारेमा कुरा गर्न सोध्न सक्छौं।)
हाम्रो कोचिंग सत्रहरू चिकित्सा स्याहारका लागि विकल्प होइनन् न त पेशेवर कानुनी सल्लाहका लागि हुन्। भावनात्मक समस्याहरू प्रबन्ध गर्न र सम्बन्ध सुधार गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
स्काइप कोचिंग निजी सत्रहरू व्यावसायिक प्रशिक्षण
तपाईं नयाँ सीपहरू सिक्न चाहनुहुन्छ; वा तपाइँ विभिन्न सन्दर्भमा अवस्थित कौशलहरू लागू गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं राम्रो सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। तपाईं उल्टो समाधान गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं खुशी हुन चाहनुहुन्छ। संगठनात्मक कोचिंग, समुदाय / अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूको लागि।
तपाई जीवनमा नयाँ परिप्रेक्ष्य चाहानुहुन्छ, वा तपाई चाहानुहुन्छ जीवनको भावना. तपाईं परिवर्तन गर्न वा आफ्नो बानी वा बाध्यता नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईं चाहनुहुन्छ घर प्रशिक्षण एक संगठन को लागी।
तपाईं राम्रो सम्बन्धहरू चाहनुहुन्छ; तपाईं गुणवत्ता चाहनुहुन्छ साझेदारी, अभिभावक वा नेतृत्व. तपाईं सम्बन्ध मुद्दाहरू प्रबन्ध गर्न चाहनुहुन्छ (युगल कोचिंग; परिवार कोचिंग; वा टीम कोचिंग)। तपाईं चाहनुहुन्छ आकस्मिक योजना वा प्रकोप राहत.
तपाईं सफलता चाहनुहुन्छ। तपाईं घर वा काममा व्यक्तिगत वा सम्बन्ध समस्याहरूको समाधान गर्न चाहनुहुन्छ। तपाई प्रबन्ध गर्न चाहानुहुन्छ cod depend depend सम्बन्ध वा लामो अवधि दुरुपयोग वा हेरफेर. तपाईं चाहनुहुन्छ शरणार्थी व्यवस्थापन हराएका वा विच्छेदन भएका व्यक्तिहरूको लागि।
हामी मानिसहरूलाई लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दैनौं जुन हाम्रो विचारमा,
आपराधिक, अनैतिक वा बच्चाहरूलाई चोट पुर्‍याउने हो।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् & #8230; तपाईंको ईमेल ठेगाना हामीसँग सुरक्षित छ।